Mumwe Mudzidzi Oendeswa Mujeri neNyaya yeKuratidzira Kusafarira Mari Yaanotambiriswa
Mutungamiri weARTUZ VaObert Masaraure
Dare ramejastiriti muMasvingo neMuvhuro rakatongera nhengo yeAmalagamated Teachers Union of Zimbabwe(ARTUZ), Muzvare Sheila Chisirimunhu kugara mutirongo kwemwedzi gumi nemitanhatu mushure mekunga vabatwa vaine mhosva yekuungana kuti varatidzire nemhosva yekuda kukonzera mhirishonga muna Chikumi.
Muzvare Chisirimunhu, vaipomerwa mhosva yakafanana nemutungamiriri wesangano ravo, VaObert Masaraure, avo vakawanikwa vasina mhosva musi weChishanu nemutongi wedare mumwechete.
Vachitura mutongo wavo, VaMbonisi Ndlovu, vaudza dare kuti vawana humbowo hwaroverera Muzvare Chisirimunhu, nemhosva uye vazovabvisira mwedzi mitanhatu kana vakasapara mhosva yakanana naiyoyi.
Izvi zvinoreva kuti Muzvare Chisirimunhu, vave kupika mwedzi gumi chete mujeri. Gweta revaviri ava rinova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaMartin Mureri, vaudza Studio 7, kuti Muzvare Chisirimunhu, vatoendeswa kujeri nemutongo uyu.
VaMasarure, vati havatambiri mutongo uyu vachiti zviri pachena kuti matare ave kupindirwa neve zvematongerwe enyika.
VaMasaraure, vati vacharwira kuti nhengo yavo ibudiswe mujeri nenzira dzematare uye vacharatidzira muMasvingo kwenguva yakareba kusvika mumwe wavo aburitswa. VaMureri, vati vatotanga kugadzirira mapepa ekuendesa nyaya iyi kudare repamusoro vachiramba mutongo wapuwa nemutongi.
Muchuchusi wedare Muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti Muzvare Chisirimunhu vakabatwa nemhosva yekuita gungano nekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga
musi wa22 Chikumi gore rino.
Vanoti vakatyora chikamu chemakumi matatu nenonwe chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Asi mudare Muzvvare Chisirimunhu vairamba mhosva iyi vachiti bumbiro remutemo uye mutemo wevashandi munyika unovabvumidza kuratidzira murunyararo.